War - Jaakad yareysa anti-virus oo ilaaliya qoyskaaga
Dhicis & Jiilaal
Guga & Xagaaga
Jaakada yareysa fayraska anti-virus-ka ayaa qoyskaaga ilaaliya
Jaakada Antimicrobial iyo antiviral light down: Virus-ku waa noole yar oo fudud oo ay kujiraan kaliya hal nooc oo ah nucleic acid (DNA ama RNA) oo ku qasban inuu ku noolaado unugyada linenka ah kuna tarmo isugeyn. Inkasta oo fayrasyadu ay fududyihiin qaab dhismeedkooda iyo cabirkoodaba dadka iyo dhirkaba way xannuunsan karaan oo dili karaan. Fayrasyada yar yar ee DNA, tusaale ahaan, qaarkood waxay sababaan calool mareenka dadka iyo doofaarka markale, halka kuwa kale ay quudiyaan saacadaha qumanka ee bini aadamka oo aysan awood u laheyn inay la dhaqmaan cudurada keena laftooda, laakiin iyadoo la kaashanayo adenovirus, fayras kale oo caawiye ah oo ku dhaca qumanka.
Feyraska dadka aad ugu dhaca waa hargab! Hargabku wuxuu u dhintaa in ka badan 88,000 oo qof sanadkii Shiinaha ， In ka badan 80 boqolkiiba waa waayeel da 'ah oo ka weyn 60 sano jir. Fayrasyada infalawansada waxaa badanaa lagu kala qaadaa dhibcaha hawada, xiriirka u dhexeeya dadka u nugul iyo dadka cudurka qaba, ama taabashada walxaha wasakhaysan. Xilliga jiilaalka guud waa xilli-dhacdooyin badan, badanaa waxaa sababa fayraska ifilada fayraska iyo fayraska hargabka B .Nashqadeeyaha ayaa jeclaan lahaa inuu kuu sheego in ujeedka asalka ah ee badeecada ay tahay inuu ilaaliyo caafimaadka naftiisa iyo qoyskiisa.
Dharka bakteeriyada ayaa si aad ah ugu bislaaday suuqa, tijaabada iyo tijaabada ka hortaga fayraskuna si siman ayey u siman yihiin. Cudurka faafa ee guriga si tartiib tartiib ah ayuu u istaagay, laakiin fikirka labaad, sheygan sidoo kale saameyn gaar ah ayuu ku leeyahay fayraska hargabka caadiga ah, sidaa darteed waa la diray qof walba, sheyga waa taxane waalid-cunug, mood fudud.Waxaan rajeynayaa in adduunka oo dhan nabad kuwada noolaan karo lagana xoroobi karo cudur iyo musiibo
Jaakadan khafiifka ah ee hoos u dhiganta ayaa ku habboon da 'kala duwan oo da' ah, waana la gashan karaa carruurta iyo dadka waaweynba. Waxaa loo xirxiran karaa sida dharka waalidka-ilmaha ama lammaanaha si qoyskaaga looga dhigo mid diirran oo xiriir dhow.Haddii ay tahay safar, qoys, ama joogitaan joogto ah, jaakadda hoose waxay bixisaa habboonaan aan xad lahayn.
Degmada Benniu Town Xinbei Changzhou Jiangsu China
Right Xuquuqda daabacaadda - 2019-2020: Changzhou Suxing Century Dharka Co., Ltd. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.